INKANTO - Planet IT Myanmar ကို ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၊ စမ်းချောင်း၊
Planet IT Myanmar ကို ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၊ စမ်းချောင်း၊
ကုန်ပစ္စည်း & ဝန်ဆောင်မှု
နည်းပညာ & ဖြေရှင်းချက်
INKANTO APX FH+ PREMIUM EXTRA WAX/RESIN
barcodes, အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အခြားသင်္ကေတများ၏တိကျသောပုံနှိပ်အရည်အသွေးကိုထောက်ပံ့ပေးသောဖဲကြိုး။ ပရီမီယံထုတ်ပေးပေးသောဖဲကြိုး။ ဒီ Inkanto မှအစွမ်းထက်ဖယောင်းဖဲကြိုးဖြစ်သည်။
INKANTO AXR7+ Ribbon Super Premium Resin
ဖဲကြိုး Super Premium ဗဓေလသစ်သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်။ နှစ် ဦး စလုံးအရေးအသားအရည်အသွေးနှင့်ပုံနှိပ်အကြမ်းခံ၏စည်းကမ်းချက်များ၌နှစ် ဦး စလုံး။ အလွန်ကောင်းတဲ့ပုံနှိပ်ခြင်း အားလုံးစံဘားကုဒ်များသည် သေးငယ်တဲ့စာသား၏
INKANTO AWR1 / AWR8 STANDARD WAX
AWR1 / AWR1 သည် Inkanto အကွာအဝေးရှိနောက်ဆုံးပေါ်ဖဲကြိုးဖယောင်းတိုင်များဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းပါ ဒါကအရမ်းကိုအပြိုင်အဆိုင်ရှိတယ်။ စီးပွားရေးတိုးချဲ့ပြီးစီးပွားရေးအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်မောင်းနှင်ပါ။
INKANTO APR1 PREMIUM WAX/RESIN
ဖဲကြိုးမော်ဒယ် APR1 ပရီမီယံ ဖယောင်း / ဗဓေလသစ် ကောင်းတယ် ကပုံနှိပ်ရလဒ်များကို စက္ကူ coated နှင့် ဒြပ်ထပ်ပြောသည် (PE, PP, PET) သည်အစွန်းအထင်းများခံနိုင်သည်။ ဘားကုဒ်ကိုပုံနှိပ်နိုင်သည်။ မြင့်မားသောပြတ်သားမှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုတို့ပါဝင်သည်
Copyright © 2021	Planet IT Myanmar ကို ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၊ စမ်းချောင်း၊ All rights reserved. Theme: Flash by ThemeGrill.	Powered by WordPress